Ahoana ny fomba hanampiana mpikambana amin'ny karama amin'ny tranokalanao WordPress. Martech Zone
Zoma, Desambra 6, 2013 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo fanontaniana azoko tsy tapaka dia ny hoe fantatro na tsia ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny WordPress. Wishlist dia fonosana feno izay mamadika ny tranokalanao WordPress ho lasa mpikambana miasa feno. Tranokala WordPress maherin'ny 40,000 no efa mihazakazaka an'ity rindrambaiko ity, ka voaporofo, azo antoka ary tohanana!
Wishlist Anisan'izany ny toetran'ny mpikambana
Haavo mpikambana tsy voafetra - Mamorona Silver, Gold, Platinum, na ambaratonga hafa tianao! Aloavy bebe kokoa ny haavon'ny fidirana avo kokoa - ao anaty bilaogy iray ihany izy rehetra.
WordPress Integrated - Na manangana tranokala vaovao ianao na mifangaro amin'ny tranokala WordPress misy, ny fametrahana ny WishList dia mitaky famongorana ny rakitra, mampakatra azy, ary mampihetsika ny plugin!
Safidy maha-mpikambana azo ovaina - Mamorona ambaratonga maha-mpikambana maimaimpoana, fitsapana, na karamaina - na ny fitambaran'izy telo.
Fitantanana mpikambana mora - Jereo ny mpikambanao, ny fisoratana anarana, ny maha-mpikambana azy, ary maro hafa. Mora manatsara ny mpikambana, mamindra azy ireo amin'ny ambaratonga samihafa, miato ny maha-mpikambana azy ireo, na mamafa azy tanteraka.
Fandefasana atiny milahatra - Mianara diplaoma amin'ny mpikambana iray hatramin'ny iray hafa. Ohatra, afaka 30 andro dia azonao atao ny manatsara ny mpikambana avy hatrany amin'ny Free Trial ka hatramin'ny Silver ambaratonga.
Fanaraha-maso jerena atiny - Tsindrio fotsiny ny bokotra "Afeno" hiarovana atiny manokana ho an'ireo mpikambana amin'ny sehatra iray manokana. Mamorona mpikambana "modular" ary afeno amin'ny ambaratonga hafa ny atiny.
Fampidirana ny lisitry ny fiantsenana - Miorina tsara amin'ny rafitra fiantsenana malaza indrindra, anisan'izany ny ClickBank, sy ny maro hafa.
Fidirana multi-level - Omeo fidirana amin'ireo ambaratonga marobe ao anatin'ny maha-mpikambana anao ny mpikambanao. Ohatra, mamorona toerana fisintomana afovoany miaraka amin'ny fidirana omena ireo mpikambana amin'ny ambaratonga rehetra.
Ampiasao ny rohy mifandray ary
Atombohy anio ny fitsapana anao maimaim-poana!
Tags: WishlistWordPressmpikambana ao amin'ny wordpressplugin mpikambana ao amin'ny wordpress